बिख्यात फुटबलर लियोनल मेसीले अन्तत बिवाह गरेका छन्, बाल्यकालकी साथी एन्तोनेला रोकुजोसँग । ३० वर्षीय अर्जेन्टिनी फुटबलर मेसीले आफुभन्दा एक बर्ष कान्छी एन्तोनेलालाई दुलही बनाएको डेली मेलको अनलाइन संस्करणमा उल्लेख छ । लामो समय एकसाथ बस्दै आएका उनीहरुको दुई छोरा छन् ।…
जुवामा २२ अर्ब रुपैँया र ५ वटी श्रीमती हारे साउदी राजकुमारले
१ असार । जुवाको नशामा चुर्लम्म डुबेका साउदी अरबका राजकुमारले जुवाको खालमा अरबौँ रुपैँया गुमाए नै ५ वटा श्रीमती समेत गुमाएका छन् । राजाका भतिज प्रिन्स मजेद बीन अब्दुल्लाह अल सूदले जुवाको खालमा ६ घण्टाको अन्तरमा २२ अर्ब रुपैँया र ५ वटी श्रीमती…
एक दिनमा ३६ वटा अण्डा पार्ने कुखुरा !
एउटा पोथी कुखुराले दिनमा कतिवटा अण्डा पार्न सक्ला ? भारतको जयपुरस्थित घाटगेटमा रइस खानले पालेको कुखुराले २४ घण्टामा ३६ वटा अण्डा पारेको छ । दिनमै ३६ वटा अण्डा पार्ने उक्त कुखुरालाई हेर्नका लागि टाढा–टाढाबाट समेत मानिसहरु आउने गरेका छन् । कुखुरा मालिक रइस…
भारतीय युवतिले काटिन बलात्कार गर्न खोज्ने साधुको लिंग
१२ जेठ । आफूलाई बलत्कार गर्न खोज्ने एक साधुको लिंग च्वाट्टै काटिदिएकी भारतीय युवतीले सामाजिक सञ्जालमा खुबै चर्चा तथा प्रशंसा पाएकी छिन् । समाचार अनुसार केरला राज्यमा धर्मगुरु हरी स्वामीले २३ वर्षिया युवतीलाई पाँच वर्षदेखि यौन शोषण गर्दै आएका थिए । अति भएपछि युवतीले…
यी हुन् लाशसंग सुत्ने व्यक्ति
एजेन्सी २९ बैशाख । प्रेममा पागल हुनेहरुका अनेक कथाहरु पढ्न, सुन्न र देख्न पाइन्छन् । प्रेमका खातिर मानिसहरु विभिन्न क्रियाकलापहरु गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै अनौठो वास्तविकताले सबैलाइ अच्चम्भित बनाएको छ । घटना हो बेलायतको । ५० वर्षीया श्रीमती वेन्डी डेभिसनको गत २१ अप्रिलमा…
जुन टापुमा महिलालाई जान बन्देज छ
२९ बैशाख- युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको जापानको एउटा टापू छ जहाँ महिलालाई जान बन्देजछ । जापानको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित ओकिनोशिमा टापूमा धार्मिक कारण पुरुषहरुले मात्र जाने अनुमति पाउँछन् । टापूमा पुगेका व्यक्तिहरुलाई त्यहाँबाट कुनै पनि सम्झनलायक चीज ल्याउने अनुमती छैन ।…
२० बैशाख- पत्रकारलाई चुनौति दिने एक रोबोट आएको छ । एक सेकेण्डमा ३ सय शव्द लेख्न सक्ने रोबोट पत्रकार फिल्डमा आएपछि अक्षरसंग जोडिएका धेरैको भविष्य जोखिममा हुने सम्भावना देखिएको छ । जिआओ नान नामक रोबोट चीनले हालै तयार गरेको हो । लेखनको अद्भुत क्षमता भएको रोबोट…
क्यान्सर पत्ता लगाउने ‘ब्रा’
२२ बैशाख- मेक्सिकोका १८ वर्षीय किशोरले स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने ‘ब्रा’ डिजाइन गरेका छन् । आफ्नो आमाको स्तन क्यान्सरबाट पीडित भएपछि जुलियन रियोले यस्तो ब्रा पत्ता लगाएका हुन् । कलेजका साथीहरुको सहयोगमा डिजाइन गरिएको उक्त ब्राको नाम ‘इभा’ राखिएको छ ।
रामायण र महाभारत दुबै ठूला युद्ध हुन । यी फरक स्थान र फरक परिबेशमा लडिएका थिए । तर रामायण र महाभारत युद्धमा केही पात्रहरु दोहरिएका छन् । हनुमान हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने जोकोहीले हनुमानलाई राम्रोसँग चिनेका छन् । रामायणमा प्रमुख पात्रको रुपमा देखिएका हनुमान…